Imba yeGucci: Iyo chaiyo-yehupenyu nyaya yaPatrizia Reggiani akatsanangura - Pop-Tsika
Imba yeGucci: Iyo chaiyo-yehupenyu nyaya yaPatrizia Reggiani akatsanangura
Iyo inotevera biographical drama Imba yeGucci yakaburitsa yavo yekutanga yepamutemo tirera, uye vatariri vatoshamiswa. Iyi firimu inotungamirwa neAward Award Award Ridley Scott uye nyeredzi Lady Gaga uye Adam Mutyairi mukutungamira mabasa.
Iyi firimu inonzi yakavakirwa pabhuku ra2001 Iyo Imba yeGucci: Inonakidza Nyaya yeMhondi, Kupenga, Glamour, uye Makaro naSara Gay Forden. Imba yeGucci zvakare nyeredzi dzinopa mibairo-vatambi Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek, naJeremy Irons.
iyi tweet kuti igamuchire yega #ImbaImba yeGucci zvirimo uye matiketi zviyeuchidzo pakati pazvino nekusunungurwa.
Tarisa tirera yepamutemo ine nyeredzi Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons naAl Pacino, inotungamirwa naRidley Scott. Chete mumitambo November 24. pic.twitter.com/7Shi2yFvlT
- Imba yeGucci (@HouseOfGucciMov) Chikunguru 30, 2021
Imba yeGucci inosimbisa kuuraya kwakaipisisa kwaMaurizio Gucci nemukadzi wake aimbova mudzimai, Patrizia Reggiani. Yakagadzwa muna 1995, inotarisana nezviitiko chaizvo zvakakomberedza kuurawa kweGucci mugari wenhaka uye kutongwa kwaReggiani.
chii chinonakidza chokwadi nezvako
Iyo yechokwadi nyaya iri kumashure kweiyo yega firimu Imba yeGucci
Iyo Imba yeGucci inojekesa imwe yeakanyanya riveting zvinonyadzisa zveanopera makore makumi mapfumbamwe. Iyi firimu inoratidza kupondwa kwemumwe muzvinabhizimusi weItaly uye aimbova CEO weGucci, Maurizio Gucci uye zviitiko zvine chekuita nechiitiko ichi.
Musi waMarch 27, 1995, Maurizio Gucci aive bara akafa pane yake Via Palestro chivakwa chehofisi muItari. Akapfurwa katatu musana chaimo asati apinda muchivako. Muchengeti Giuseppe Onorato akapfurwawo kaviri asi akapona pakurwiswa uku.
Chiitiko ichi chakaitika makore mashoma mushure mekurambana kunorwadza kwaMaurizio Gucci naPatrizia Reggiani. Wekupedzisira aive mumwe wevapomeri vekuponda nekutaura pachena chishuwo chake chekuuraya Maurizio mushure mekuparadzana kwavo. Chiitiko ichi chakatorwa muImba yeGucci.
Kutevera makore maviri ekuferefetwa kukuru, Patrizia Reggiani akasungwa musi waNdira 31, 1997. Mapurisa akawana humbowo hwekutanga mudhayari raReggiani, rakanyorwa zita reGreek Paradeisos, pakupondwa kwaMaurizio. Izwi rinoturikira ku 'Paradise' kuChirungu.
Reggiani anonzi akaronga mhosva iyi nerubatsiro rweshamwari yake uye n'anga, Auriemma. Vakashandira hitman uye mutyairi wekutiza kuti aite humhondi. Anorova, Benedetto Ceraulo, anonzi akaendeswa neshamwari yaAuriemma. Vose vanhu vana vakatongerwa mhosva mukutongwa.
Patrizia Reggiani akapomerwa mhosva yekuronga humhondi uye akatongerwa kusvika makore makumi maviri nemapfumbamwe mutirongo. Zvichakadaro, hitman akatongerwa kugara mutirongo kweupenyu hwese. Kutongwa kwakawana kutarisisa venhau pasi rese uye vazhinji vakanzi Reggiani seye Chirikadzi Nhema.
Chinyorwa chakagovaniswa naLady Gaga (@ladygaga)
Patrizia Reggiani naMaurizio Gucci vakaroora muna 1973. Vaiwanzogadzira nhau dzerudo rwavo rwakakurumbira uye vaibatsirwa sevamwe vevakaroora vane simba mu70s. Maurizio akagara nhaka yakawanda yemabhizinesi kubva kuna baba vake.
Patrizia akazova chipangamazano wake mukuru mushure mekuroora kwavo. Vaviri ava vakatambirawo vana vaviri pamwechete. Muna 1985, Maurizio akaenda parwendo rwebhizinesi kungosiya imba yake zvachose. Kutevera makore mashoma ekuparadzana, Patrizia naMaurizio vakarambana muna 1991.
Izvo zvakazoburitswa pachena kuti Maurizio aive nehukama-hwehukama neanogadzira zvemukati Paola Franchi. Iye anga achinzi aigara neyekupedzisira panguva yekufa kwake. Pasi pehutungamiriri hwaMaurizio, fashoni chiratidzo chakarasikirwa zvakanyanya.
wwe wrestlemania 32 mhinduro 2016
Chinyorwa chakagovaniswa naAdam Driver (@adamdriversource)
Mugari wenhaka weGucci anonzi akashandisa mari yakawandisa yemari yekambani iyi pamubhadharo wake wega. Muna 1988, Maurizio akatengesa angangoita 47% yekambani kuInvestcorp. Akaenderera mberi nekutengesa zvese zvaakange aripira homwe yemari inosvika $ 170 miriyoni.
Zvese izvi zvinhu zvakashanda sekutyaira kuseri kwechirongwa chaPatrizia Reggiani chekuuraya kwaMaurizio. Muhurukuro neThe Guardian, murume ane makore makumi manomwe nemaviri akavhura nezve chinangwa chekuparwa kwemhosva.
unoziva riini kuti zvapera
'Ndakanga ndatsamwira Maurizio pamusoro pezvakawanda, zvakawanda zvinhu panguva iyoyo. Asi pamusoro pezvose, izvi. Kurasikirwa nebhizinesi remhuri. Yakanga yakapusa. Kwakave kukundikana. Ndakazadzwa nehasha, asi hapana zvandaikwanisa kuita. Haafanire kunge akandiitira izvozvo. '
Mushure mekusungwa kwaReggiani muna 1998, vanasikana vake Alessandra naAllegra vakakumbira kupidiguka, vachitaura nezvekurwara kwaamai vavo. Reggiani akaonekwa aine bundu muuropi. Kunyangwe dare risina kupa chikumbiro, mutongo wakadzikiswa kusvika pamakore makumi maviri nematanhatu.
Reggiani akaramba kuburitswa parole yebasa muna 2011 asi akazotora chirongwa chekuburitsa basa mugore ra2014. Akashanda sachipangamazano weBozart mushure mekupedza makore gumi nematanhatu ari mutirongo. Akaburitswa zviri pamutemo muna Gumiguru 2016 mushure mekushandira mutongo wakadzikiswa wemakore gumi nemasere nekuda kwehunhu hwakanaka.
Imba yaRidley Scott yeGucci inoteedzera rwendo rwaReggiani naGucci rwerudo, roorano, kutengesa, kusavimbika, uye mhosva. Patrizia anonzi akaonga Lady Gaga Kukanda chinzvimbo chekutungamira asi kwakaratidza kuora moyo kumuimbi nekusasangana naye mumunhu.
Chinyorwa chakagovaniswa neImba yeGucci Movie (@houseofguccimovie)
Ndichiri Lady Gaga inoridza Patrizia Reggiani muImba yeGucci, Adam Driver anoratidza murume wake, Maurizio Gucci. Iyi firimu inorongerwa kuburitswa mhiri kweUS munaNovember 24, 2021. Icharovawo emitambo yeUK musi waNovember 26, 2021.
Imba yeGucci ichave iriko kutepfenyura paParamount + mushure mekuburitswa kwemitambo.
Uyezve Verenga: Joe Bell: Iyo inoshungurudza nyaya yechokwadi kuseri kweMark Wahlberg nyeredzi nyeredzi
zvekuita kana waita chimwe chinhu chisina kunaka
tarisa usazofema online mahara
zvinhu zvinonakidza zvekutaura nezvazvo
maitiro ekuita nekunyengera muwanano
kubatsira sei shamwari yako nekurambana
ziva zviratidzo zvekuti ari kufarira